Malunga nathi -MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
MOLONG TATTOO UKUBONELELA CO., LTDesekwe ngo-2009, umenzi wobuchwephesha weTattoo eTshayina, ubonelela ngomgca opheleleyo wezixhobo zomvambo kunye nezinto ezikhoyo. Inaliti yeTattoo, iCartridge yeCattoo, Umatshini weTattoo, iTattoo Kit, iTattoo Ink, ukuBamba okulahlwayo, iTip elahliweyo, uNikezo lwaMandla, iZibonelelo zezoNyango, Izixhobo zeTattoo Studio, Izinto zokubhoboza, Izinto zoBumba, njalo njalo.
Injongo yethu ephambili kukunika abathengi bethu ukuhanjiswa okukhawulezayo, inkonzo enobungane kunye nobungcali kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu, ukwakha ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi bethu ngokusekwe kumgangatho weemveliso zethu ngexabiso lokhuphiswano lwefektri.
Senza inkonzo egqibeleleyo kunye neemveliso ezisemgangathweni ophezulu. Ukusuka kwabaqalayo kumvambo ukuya kubazobi abaziingcali, iimveliso zethu zitsala umdla wabo. Wamkele naziphi na izimvo kunye neengcebiso ezivela kubathengi bethu abaxabisekileyo. Siza kuqhubeka nokuphucula imveliso kunye nenkonzo yethu.
Sisebenzela i-USA, Canada, i-Yurophu, i-Asiya, uMzantsi Melika, i-Australia, iNew Zealand, amazwe akuMbindi Mpuma, uMzantsi Afrika nazo zonke ezinye iindawo kwilizwe jikelele.
Iqela lethu lisebenza ngokufanelekileyo kwaye linobuhlobo, nceda unxibelelane nathi mahala ukuba unawo nawuphi na umbuzo.
Wamkelekile kwi UKUBONELELA NGOKUQHUBA KWI-MOLONG, inkampani yethu ngumthengisi ophambili wezixhobo ze tattoo e-China, egxile kwiintlobo ezahlukeneyo zezinto ze tattoo.
Sinamava eminyaka ekuveliseni iinaliti zeTattoo, iinaliti zeTattoo Cartridge, umatshini weTattoo, iGrips, iiNgcebiso, uNikezelo lwaMandla, Ukutshintsha kweenyawo, iClip Cord njl.
Sinikezela ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu ze tattoo ngexabiso elifanelekileyo. Nika abathengi kwihlabathi lonke ukhetho olungcono lokonwabela iimveliso ezintle.
Inkampani yethu ibekwe kuMgangatho # 2 Building # 9 Zongtang District 1 Yiwu Zhejiang China 322000
Uphawu lwethu: MO, LBB, WhatsBravo, Flame, HRK, Hurricane Tattoo Needle.
Wamkelekile ukuba uthethe ngokuba ngumthengisi wentengiso yeemveliso zethu zorhwebo oza kuzithengisa kuphela kwilizwe lakho okanye kwingingqi ukuba iimeko ziyafezekiswa. Sinokwenza inkonzo ye-OEM kwiimveliso zabathengi bethu.
Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya ukuba unomdla kwiimveliso zethu. Ukulinda imibuzo yakho, ukwakha ubudlelwane bethu bexesha elide, yenza ukuba ishishini lethu liphezulu kwaye liphezulu.